စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်း (Success & Sociology Course) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်း (Success & Sociology Course)
စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်း (Success & Sociology Course)
Posted by Zaw Wonna on Jan 15, 2011 in News |9comments
အခုတလော လူပြောများလွန်းနေတဲ့ စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်း ကိစ္စပါ။ သင်တန်းပေးနေတဲ့ ဆရာတော်ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် http://numberonesociology.com/ မှာလည်း သွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
http://www.youtube.com/watch?v=gjSmSxShTLo မှာတော့ အဖွင့် အမှာစကား ပြောတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကြည့်ရတာတော့ အမြဲစိမ်း တွေနဲ့လည်း မကင်းသလိုပဲ။
လောကီရေးရာ ကိစ္စတွေ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် သံဃာတော်တွေ အနေနဲ့ မအပ်စပ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
ဝိနည်း ကျွမ်းကျင်တဲ့ သံဃာတော် တပါးပါးက ထင်မြင်ချက်ပေးရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
ဒီဆရာတော်ရဲ့ သင်တန်းမှာ ပို့ချတာတွေကတော့ …..
၁။ ၁မိနစ်အတွင်း မိတ်ဆွေဖွဲ့နည်း။
၂။ ၁၅မိနစ်အတွင်းအနားယူခြင်း နှင့်အမြန်ဆုံးအားသွင်းနည်း။
၈။ တယ်လီဖုန်းပြောဆိုခြင်း နှင့် ချိန်းတွေ့ခြင်း။
၉။ လုပ်ငန်းကိစ္စချိန်းဆိုခြင်း (သွား / လာ)။
၁၂။ ကမ္ဘာကျော်စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ရေး ပို့ချချက်။
၁၄ ။ လူရှေ့ သူရှေ့ စကားပြောခြင်းအတတ်ပညာ။
၁၅။ လူကြောရွှေကြော – You are Money .
၁၈။ အောင်မြင်ခြင်းခြေလှမ်းအပိုင်း (၁) ၊ အပိုင်း (၂) ။
၁၉။ လူနေအိမ် နှင့် အိမ်ခန်းများဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ။
၂၀။ You are Number One or နံပါတ် (၁)
အားလုံးကတော့ ဒီနေ့ခေတ်အတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေပါပဲ။
ဒီ Post တွေကိုရေးသမျှထဲမှာ ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ ဒီစာက အသင့်တော်ဆုံးပဲ။
မှန်တာပေါ့ ချာတူးလန်ရယ် ဆိုက်ကိုညွှန်းပေးတာ ကျေးဇူးဘဲ။ မှော်နဲ့လုပ်စားတယ်လို့ဘဲမြင်ပါတယ်။။
အဲဒီမှာ သွားဖတ်ကြည့်တော့ … တခြားသင်တန်းဆရာတွေလည်း ရှိပုံရပါတယ်..။
ဆရာတော်က ဘယ်အပိုင်းပို့ ချသလဲတော့ မသိ..။
ရေးထားတာကြည့်ပြီး ကျုပ်တောင် ပြေးတက်ချင်လာတယ်..။
အရင်က သင်တန်းကြေး ၁သိန်းယူပြီး အခု လျှော့ထားတယ်( ၁သောင်းခွဲ)လည်းတွေ့ရပါတယ်..။
သင်တန်းသား ..ရာချီ(ထောင်တောင် ချီနိုင်တယ်..)တယ်ဆိုတော့ ..အဲဒီက၀င်ငွေကြည့်ပြီး အသံထွက်လာတယ် ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
zawana ပြောသလို … ဝိနည်း ကျွမ်းကျင်တဲ့ သံဃာတော် တပါးပါးက ထင်မြင်ချက်ပေးရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ မြင်ပါတယ် …
တချို.ဘုန်းဘုန်းတွေ သဒ္ဒါတရား တအားပြင်းထန်လာလို. အသက်ကြီးမှ ရဟန်းဘ၀ကို ၀င်ရောက်လာတဲ့သူတွေ ရှိပါတရ်။ ပရိယတ္တိနဲ. ပတိပတ္တိကို ညီမျှအောင် လုပ်ဖို.အခွင့်အရေးနည်းခဲ့ရင် … ၀ိနည်းပိုင်းအားနည်းနိင်တရ် …
သာမန်လူတစ်ယောက်ဘ၀မှာဆို အမှန်လုပ်နေပေမဲ့ သိက္ခာပုဒ်တွေများလွန်းတဲ့ ရဟန်းဘ၀မှာ အမှားဖြစ်နေတတ်ပါလိမ့်မရ်။
မှားခဲ့ရင်တောင် ရဟန်းဘ၀ရောက်နေပီဖြစ်တဲ့အတွက် သက်ဆိုင်တဲ့ သံဃာ့နာယက အကြီးအကဲ ဘုန်းဘုန်းတွေကပဲ ဖြေရှင်းပါလိမ့်မရ်။
လူတစ်ယောက်က လှမ်းဝေဖန်တာက အရမ်းဝေးလွန်းလှပါတရ်။ ချာတူးပြောသလို … ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ ဒီစာက ဝေဖန်တဲ့အပိုင်းမှာ အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။ ဘာလို.လဲဆိုတော့ … တခြားပို.စ်တွေမှာ တော်တော်လေးကို ပြောထားတာတွေကြမ်းပါတရ်။ သူ.အပြစ်က ကိုယ့်အပြစ်ဖြစ်ကြမှာကို စိုးရိမ်ပါတရ်။ တစ်ကယ်လို. … သူ.မှာဘာသာရေးဖျက်ဆီးလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိပဲ ၀ိနည်းမကျွမ်းကျင်လို. ဖြစ်ရတဲ့အမှားဆိုရင် ကိုယ့်ဆီမှာပဲ အမည်းစက်ကျန်ခဲ့မှာပါ။ အဲ … သူ.မှာအဲဒီလိုရည်ရွယ်ချက်ရှိခဲ့ရင်တော့ သူ.အနာဂါတ်ကို သူ.လုပ်ရပ်ကပဲ ဖန်တီးသွားမှာပါ။ သူ.ဘာသာသူပဲ ပျက်စီးသွားမှာပါ။
ကွီးအသိတွေ တော်တော်များများ ဒီသင်တန်းတက်ဖူးကြပါတရ်။ ကွီးကိုလဲ တက်ဖို.ကမ်းလှမ်းပေမဲ့ အချိန်ညှိမရလို.ပဲ မတက်ဖြစ်တာပါ။ ဆိုလိုချင်တာက တက်တဲ့သူတွေတိုင်းအတွက် အကျိုးရှိတဲ့ သင်တန်းကောင်းတစ်ခုလို.ပဲ သိထားပါတရ်။ အဲဒီတော့ သင်တန်းတက်ဖူးတဲ့သူတွေကို နည်းနည်းမေးကြည့်ကြပါ။
အဲဒီတော့ သူငယ်ချင်းတွေ ကိုယ့်ဘာသာ သာသနာကို ကာကွယ်လိုစိတ်နဲ. အမှားလုပ်မိမှာကို ကြောက်မိပါတရ်။ မကျေနပ်ရင် သံဃာ့နာယက အကြီးအကဲ ဘုန်းဘုန်းတွေဆီကို စာတင်ပီး တိုင်တန်းနိင်ပါတရ်။
အပြတ်တော့ ပြောနိုင်သေးဘူးဗျို့။ သူ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ထားတဲ့ အချက်အလက်တွေအရတော့ လွန်လွန်ကျူးကျူးတွေ မပါဘူး။ နောက်ထွက်မဲ့ စာအုပ်တွေဖတ် အသံတွေနားထောင် (ကိုယ်တိုင်လေ့လာနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့လေ) ပြီးမှ ကောက်ချက်ချနိုင်မယ်ဗျို့။ စိတ်ဓါတမြှင့်တင်ရေးသင်တန်း လုပ်နည်းလုပ်ဟန်ထူးဆန်းတာတခုထဲနဲ့တော့ အကောင်း၊မကောင်းပြောဖို့ စောသေးသဗျို့။ သူထုတ်တော့မဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာ သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး၏တစ်ဘ၀သေသနာ ဆိုတာစိတ်အဝင်စားဆုံးပဲ။ အမှန်အကန်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါ၏။ စစ်တပ်နဲ့နီးစပ်ပုံရတာတော့ ဆိုးသဗျို့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မှန်ကန်သည်ဟု ယုံကြည်ပါက တတပ်တအား ပူးပေါင်းကူညီရန် အသင့်ရှိကြောင်းပါ။
ဒါပေမဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ မပါတ်သက်ပဲ သာမာန်ရိုးရိုးသင်တန်းဆိုရင်တော့ အထူးပြောစရာမလိုပါဘူး။ ဘာသာရေး အရေခြုံထားပြီးတော့ဒီလိုလုပ်စားတာမကောင်းပါဘူး။ ဒါဟာ နိုင်ငံရေးနဲ့ ဆက်နွယ်မှု ရှိမယ်လို့ ထင်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဉာဏ်မီ သလောက်တွေးကြည့်တာနော်။ ဒီလို လုပ်ပြနေတာဟာ ဘာသာရေး နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ အဓိကရုဏ်း တစ်ခု ကိုဖြစ်အောင်ဖန်တီး နေသလားလို့ပါ။ ဘာသာရေး ခံယူချက်ပြင်းထန်းသူတွေက ၀င်ရောက်နှောက်ယှက်စေဖို့ တစ်မင် လုပ်ပေးနေသလိုပဲ။ တာဝန်ရှိတဲ့ ဆရာတော် တွေက ဘာမှမိန့်တော်မမူ သေးတာလဲ ထူးခြားနေသလိုပဲ။ ဥပမာ- မူကြိုဆရာတော် ကတော့ တစ်ခုခု ပြောသင့်ပြီ လေ့လာမှုအားနဲ နေလို့ပဲ မတွေ့သေးသလားတော့မသိဘူး
ဒီသင်တန်းတွေဟာ လူတွေကို အမှန်တကယ်အကျိုးပြုတယ်ဆိုရင်တောင် ဆရာတော်အနေနဲ့်ကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်ကြီးတော့မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဘုရားပေးတဲ့သင်္ကန်းကိုဝတ်ထားရင် ဘုရားရဲ့သားတော်ပီပီ နေသင့်ပါတယ်။ ဒီသင်္ကန်းကို ရက်လုပ်တာ ကမ္ဘာပေါင်းလေးသင်္ချေနဲ့တစ်သိန်းတောင်ကြာခဲ့တယ်လေ။
သင်တန်းပေးမယ့် ခေါင်းစဉ်တွေကတော့ ကောင်းပါတယ် မကောင်းတာက သင်္ကန်းအရေခြုံ ဖြစ်နေသလိုပဲ လောကီရေးရာတွေ သင်ချင်ရင် လူထွက်ပြီးမှ သင်ပေါ့ ဘုန်းကြီးဝတ်နဲ့ဆိုတော့ ပိုပြီးကြည်ညိုပြီး ပြောတဲ့သူတွေလည်း ပြောရခက်အောင် ထွင်ထားသလိုပဲ ပြီးတော့ သူ့ဆိုက်ထဲမှာ ခေါင်းစဉ် စာလုံးပေါင်းတောင် မှန်အောင် မပေါင်းတတ်ပဲနဲ့ လူတွေကို သင်ဦးမယ် စာအုပ်တွေထုတ်ဦးမယ်ဆိုတော့ ကြည့်လဲလုပ်ဦးလို့ နောက်ပြီး သင်တန်းသူတွေကလည်း ဘောင်းဘီတိုနဲ့ စကပ်တိုနဲ့ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ် ဆိုရင် ဘုန်းကြီးရဟန်းကျောင်းကို အဲဒီိလိုမတော်တရော်တွေ ၀တ်ပြီးမသွားသင့်ဘူး ဆိုတာ မိဘတွေက မသင်ဘူးထင်တယ်။ ဒီလိုမျိုးတွေများလာရင် ဘာသာတရားပျောက်မှာပဲ စိုးရိမ်ရတယ်။
ခေါင်း စဉ် တွေ ကောင်း မှာ ပေါ့ သည်း ခြေ ကြိုက် တွေ ရွေး ထားတာ
ဘာ အသိပညာ အတတ် ပညာ မှ မရှိပဲ ငွေ ကို ဖြတ်လမ်းကရပြီး စည်းစိမ် ချမ်းသာပေမဲ့ စိတ် မချမ်းသာတဲ့လူ တွေ အ တွက်
မကောင်းတာလုပ်တာများတော့လဲ ဘုရားနဲ့ မျက်နှာချင်းမဆိုင် ရဲ တော့ ဘိုးတော် တွေ နတ်တွဲ ပဲ ကိုးကွယ် ကြ တဲ့ လူတွေ အကြိုက်ပါ